Vaovao - inona no mahasamihafa ny sarontava N95 sy ny KF94?
Inona no mahasamihafa ny sarontava N95 sy KF94?
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny saron-tava N95 sy KF94 dia kely noho ireo lafin-javatra izay itadiavan'ny ankamaroan'ny mpampiasa azy. KF94 no fenitra "sivana Korea" mitovy amin'ny naoty amerikana N95.
Fahasamihafana eo amin'ny saron-tava N95 sy KF94: nalahatra
Mitovy ny endrik'izy ireo ary manivana ampaha-isan-jaton'ny sombintsombiny mitovy - 95% raha 94%. Ity tabilao avy amin'ny 3M ity dia manazava ny mahasamihafa ny saron-tava Koreana N95 sy ny "kilasy voalohany". Asongadin'ireo tsanganana ireo karazana sarontava ireo.
Amin'ny metrikan'ny ankamaroan'ny olona momba azy (fahombiazan'ny filtration) dia saika mitovy izy ireo. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ireo mpampiasa sarontava dia tsy hiraharaha ny fahasamihafana 1% amin'ny sivana.
Ny fenitra KF94 dia mindrana bebe kokoa avy any Eropa mihoatra an'i Etazonia
Saingy, amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny fenitra, ny fenitra Koreana dia mitovy amin'ny fenitry ny EU mihoatra ny fenitra amerikanina. Ohatra, ireo masoivohon'ny fanamarinana amerikana dia mizaha toetra ny sivana amin'ny fampiasana sombina sira, fa ny fenitra eropeana sy koreana kosa dia manohitra ny menaka sira sy paraffin.
Tahaka izany ihany koa ny fitsapana ny filtration amerikana amin'ny tahan'ny 85 litatra isa-minitra, raha ny fitsapana ny EU sy Korea kosa dia 95 litatra isa-minitra. Na izany aza, kely ihany ireo fahasamihafana ireo.
Ny fahasamihafana hafa eo amin'ny fanondroana saron-tava
Ankoatry ny fahasamihafana 1% amin'ny filtration dia misy fahasamihafana kely amin'ny antony hafa.
• Ohatra, ny fenitra dia mitaky ny saron-tava N95 mba ho mora kokoa ny miaina ny ("fanoherana ny fofonaina").
• Ny sarontava Koreana dia takiana mba hitsapana ny "famafana CO2", izay manakana ny CO2 tsy hitsangana ao anaty saron-tava. Mifanohitra amin'izany, ny saron-tava N95 dia tsy manana an'io takiana io.
Na izany aza, ny ahiahy momba ny fananganana CO2 dia mety be loatra. Ohatra, fandalinana iray. nahita fa, na dia mandritra ny fanatanjahan-tena antonony aza, ny vehivavy manao saron-tava N95 dia tsy nanana fahasamihafana amin'ny fatran'ny oksizena amin'ny rà.
• Mba hahazoana mari-pahaizana ny marika maska, Korea dia mitaky fanadinana fitoviana tahaka ny olona ataoko etsy ambany. Ny fanamarinana US N95 dia tsy mitaky fitsapana mety.
Na izany aza, tsy midika izany fa tsy tokony hanao fitsapana mifanaraka amin'ny saron-tava N95 ny olona. Ny masoivohon'i Etazonia izay mifehy ny fiarovana ny toeram-piasana (OSHA) dia mitaky ireo mpiasa amin'ny indostria afovoany mba hosedraina indray mandeha isan-taona. Ny fitsapana fitondra tena fotsiny dia tsy takiana mba hahitan'ny mpanamboatra marika N95.
N95 vs KF94 sarontava: Andalana ambany
Amin'ny toe-javatra iheveran'ny ankamaroan'ny olona (filtration) saron-tava N95 sy KF94 dia saika mitovy. Na izany aza, misy fahasamihafana kely amin'ny anton-javatra hafa, toy ny fanoherana ny fifohana rivotra sy ny fitiliana.
Masinina fanamboarana sarontava mandeha ho azy 2D N95 feno
Masinina fanaovana maska ​​KF94 karazana trondro karazana 3D